“ရွှေမြန်မာ”: အင်တာနက်ကို E-mail ပို့ရုံ၊ Chat လုပ်ရုံပဲလို့သာ သင်ထင်နေသလား
အင်တာနက်ကို E-mail ပို့ရုံ၊ Chat လုပ်ရုံပဲလို့သာ သင်ထင်နေသလား
ရေးသားသူ: yamin| အကြောင်းအရာ: နည်းပညာ, ဗဟုသုတ, မျှဝေခြင်း
အသုံးဝင်မှု အပိုင်းကပြောရင် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက လူသန်းပေါင်း (၁၃၀၀)ကျော်ပါဝင်နေတဲ့ မြို့တော်ကြီးတစ်ခုလို့လည်း ပြောနိုင်ပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်က လူသန်းပေါင်း (၇၅၀၀) ကျော်ရဲ့ ၆ပုံ ၁ပုံ က ဒီနေ့ခေတ်မှာ အင်တာနက်ပေါ်က တစ်ဆင့် အချင်းချင်းချိတ်ဆက်၊ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေကြပါတယ်။ စာမတက်တဲ့သူ၊ ကိုယ်အင်္ဂါချို့တဲ့သူ ၊ နားမျက်စိအလင်းမရသူများတောင်မှ အင်တာနက်နဲ့ ချိတ်ဆက် အသုံးပြုလာနိုင်ပြီလို့ ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။
လူသန်းပေါင်းများစွာ အသုံးပြုတဲ့ အင်တာနက်ရဲ့ အသုံးပြုခကလည်း သာမန်ဆင်းရဲသူများပါ သုံးလာနိုင်အောင် ဈေးနှုန်းသက်သာလာတဲ့အတွက် ကမ္ဘာဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေရဲ့ အင်တာနက်အသုံးပြုမှုဟာလည်း တစ်နေ့တစ်ခြားတိုးတက်များပြားလာခဲ့ပါတယ်။ လူကြီးလူငယ်မရွေး အင်တာနက်ကြိးကို ပါးစပ်ဖျားက မချ ၊ လက်ကကိုင်လာနိုင်တဲ့ အင်တာနက်ရဲ့ တန်ခိုးအရှိန်ဟာ ကြီးမားလာနေပါပြိ။ အင်တာနက်ကို ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနေတဲ့ နှုန်းထားဟာ ဆိုရင်ဖြင့် တစ်နာရီထက် တစ်နာရီ ပိုပြီး တိုးတက်လျက်ရှိပါတယ်။ အင်တာနက်ဟာ ဘယ်သူ့ကိုပဲဖြစ်ဖြစ် အကြောင်းအရာပေါင်းစုံကို တစ်ထိုင်တည်း၊ တစ်ချက်တည်းနဲ့ ရှာဖွေပေးနိုင်ပြီး လွယ်ကူလျင်မြန်စွာ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းနဲ့ ဆက်သွယ်ပေးနိုင်တဲ့ အစွမ်းရှိပါတယ်။ ဒီတော့ အင်တာနက်သုံးတဲ့အခါ ဘာတွေသိထားရမလဲဆိုတာ အောက်မှာ ဖေါ်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
အင်တာနက်အသုံးပြုတဲ့အခါ သိထားရမှာက ဘယ်လိုအကြောင်းအရာ အချက်အလက်တွေ ဘယ်နေရာကနေ ရှာလို့ရမလဲ ဆိုတာပါပဲ။ အင်တာနက်ပေါ်ကို အစိုးရတွေက အစပြုလို့ နိုင်ငံတကာကော်ပိုရေးရှင်းတွေ ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေ လုပ်ငန်းရှင်စီးပွားရေးသမားတွေ အလယ် သာမန်ကျောင်းသားကျောင်းသူများတွေအဆုံး အချိန်နဲ့ အမျှ အမျိုးမျိုးသော အကြောင်းအရာတွေကို တင်လေ့ရှိပါတယ်။ အင်တာနက်အပေါ်ကို သူတို့ရဲ့အကြောင်းအရာတွေ ၊ သူတို့သိတဲ့အချက်တွေကို တင်ခြင်းအားဖြင့် အဲဒီအချက်တွေကို အခြားသူတွေသိမယ်၊ သူ့အလုပ်ကို နိုင်ငံတစ်ဝန်းက လူတွေ ပိုသိလာမယ်။ ဒီလိုနဲ့ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ ပညာရေးကို ကမ္ဘာအရပ်ရပ်က သိပြိး ပိုမိုအောင်မြင်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒီနည်းအားဖြင့် မိမိသိတဲ့အချက်ဖြစ်စေ၊ မိမိရဲ့ကဗျာဖြစ်စေ၊ မိမိရဲ့ဆောင်းပါးဖြစ်စေ၊ မိမိရဲ့အတွေ့အကြုံတွေဖြစ်စေ၊ မိမိရဲ့မှတ်ချက်တွေကိုပဲ ဖြစ်စေ လူတွေ အဖွဲ့အစည်းတွေဟာ အင်တာနက်ပေါ်မှာ တင်လာကြပါတယ်။ ဒီလိုအချက်တွေ တင်လာကြတဲ့အတွက် အင်တာနက်ပေါ်မှာ အချက်အလက်တွေဟာ တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ ပိုမိုပြီး များပြားလာပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ပဲ ယနေ့လူတွေဟာ လိုအပ်တဲ့အချက်မှန်သမျှကို အင်တာနက်ကနေ ရှာကြတဲ့ ဓလေ့တစ်ခုကို ကြိုက်သည်ဖြစ်စေ၊ မကြိုက်သည်ဖြစ်စေ လက်ခံလာရတော့တာပါပဲ။
ယနေ့ထက်ထိ အင်တာနက်လောက် ကမ္ဘာအရပ်ရပ်က လူသားတွေအတွက် လိုအပ်တဲ့အချက်တွေကို တစ်ထိုင်တည်း၊ တစ်နေရာတည်းကနေ ရယူနိုင်အောင် စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်တဲ့အရာ လူ့သမိုင်းမှာ မပေါ်ဖူးသေးပါဘူး။ တစ်ဖက်က ကြည့်ရင်လည်း အချက်အလက်တွေ စုံလာသလို၊ မလိုအပ်တဲ့ အချက်အလက်တွေလည်း အင်တာနက်ပေါ်မှာ အများကြီး ရှိလာပါတယ်။ လူတွေဟာ ကောင်းတာတွေကို တင်ကြသလို၊ မလိုအပ်တာတွေကိုလည်း တင်ချင်တင်မိကြပါတယ်။ ဘယ်သူမဆို ကောင်းတာ ဆိုးတာတွေကိုလည်း တင်လို့ရလို့ပါပဲ။ တကယ်တော့ အင်တာနက်ပေါ်က အချက်တွေရဲ့ ကောင်းတာဆိုးတာဟာ လူတွေရဲ့ ကောင်းတာဆိုးတာနဲ့ပဲ တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်ပါတယ်။ အခုဆိုရင် အင်တာနက်သုံးမယ့်သူတစ်ဦးအတွက် အရေးကြီးတဲ့အချက်ကို ခန့်မှန်းလို့ ရပြီလို့ ထင်ပါတယ်။ သန်းနဲ့ချီပြီး တန်ဖိုးရှိတဲ့အချက်တွေလည်း ရှိသလို သန်းနဲ့ချီပြီး အသုံးမ၀င်တဲ့ အမှိုက်တွေလည်း ရှိတဲ့ အင်တာနက်ကို သုံးတဲ့အခါ ကိုယ်လိုတဲ့အချက်ကို ဒက်ထိရှာဖွေနိုင်ဖို့ အရေးကြီးသွားပါပြီ။ ဒါဟာ အင်တာနက်နဲ့ ပတ်သက်လို့ လူတိုင်းသိရှိနားလည်ရမယ့် ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ အင်း ပြောရရင် ဒီလိုကိစ္စဟာ အင်တာနက်မှာမှ မဟုတ်ပါဘူး။ ရပ်ကွက်ထဲက ဗီဒီယိုခွေဆိုင်မှာ သွားငှားရင်တောင်မှ ခွေတွေကို ကိုယ့်ဟာကိုယ် ရှာတာထက် ခွေဆိုင်က ငှားပေးတဲ့သူကို မေးလိုက်တာက ပိုပြီး မြန်ဆန်ထိရောက်မှုရှိတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ ? အဖြေက ရှင်းရှင်းလေးပဲ။ ခွေဆိုင်က လူက လာသမျှ လူတွေရဲ့ ဇာတ်လမ်းအပေါ် အမြင်တွေကို မေးမြန်းမယ် ငှားသူတွေမရှိရင် ဆိုင်ထဲက ခွေတွေကို ကြည့်နေ၊ စီနေမယ်။ ကြာတော့ သူ့ဝန်းကျင်မှာ ကျွမ်းကျင်လာပြီပေါ့။ ဒီတော့ ခွေငှားတဲ့သူလာတော့ သူ့အနေနဲ့ အလွယ်တကူ ထုတ်ပေးလာနိုင်တာပေါ့။ ဒီလိုပဲ အင်တာနက်ထဲမှာ သန်းနဲ့ချီတဲ့ အချက်တွေထဲက ကိုယ်လိုချင်တာကို ကိုယ့်ဟာကိုယ် လိုက်ရှာတဲ့အခါ ဘယ်အကြောင်းအရာက ဘယ် website မှာရှိတယ်ဆိုတာ သိဖို့ရာ မလွယ်ကူလှပါဘူး။ အသစ် အသစ်တိုးလာတဲ့ Website တွေကလည်း တစ်နေ့ထက် တစ်နေ့ တိုးတက်များပြားလာနေပါတယ်။ ကိုယ်ကတော့ ကိုယ်ရှာချင်တာကို သိနေတယ်။ ဥပမာ အင်္ဂလန်မှာရှိတဲ့ တက္ကသိုလ်တွေသိချင်တယ်ဆိုပါတော့။ ဒီအခါ အင်တာနက်ထဲမှာ ရှာပေးတဲ့အဖွဲ့တွေ၊ Website တွေ အများကြီးရှိတယ်။ သူတို့ကို Search Engine တွေလို့ ခေါ်တယ်။ ယခုလောလောဆယ် Search Engine တွေထဲမှာ နာမည်ရနေတာက Google နဲ့ Yahoo တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အင်တာနက်သုံးမယ့်သူတွေဟာ Search Engine တွေဖြစ်တဲ့ www.google.com နဲ့ www.yahoo.com တို့ကို သုံးတတ်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဒီတော့ အရင်ဆုံး အင်္ဂလိပ်စာတစ်ခုကိုတော့ အနည်းအကျဉ်း၊ အဓိပ္ပာယ်သိထားရင် အဆင်ပြေပါတယ်။ အာဖရိကတိုက်၊ အာရှတိုက်က အင်တာနက်သုံးတဲ့သူတွေအားလုံး အင်္ဂလိပ်စာအများကြီး မတတ်ပေမယ့် အင်တာနက်ပေါ်မှာ လိုချင်တဲ့အချက်တွေကို ရှာနေကြတယ် မဟုတ်လား? တဖြည်းဖြည်း အင်တာနက်သုံးရင်းနဲ့ပဲ အင်္ဂလိပ်စာကိုလည်း တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေ ပိုတိုးတက်လာဖို့ အခွင့်အလမ်းတွေ ရှိလာနေပါတယ်။
ဂျေဂျူဝိုင် said... @ 24 January 2010 at 20:55
ကျွန်တော်လည်း ဒီအကြောင်းရေးကြည့်ချင်နေတာ ကြာပေါ့။
ခပ်ညံ့ညံ့ said... @ 25 January 2010 at 12:28
ဒါမျိုးလေးတွေ နောက်ထပ်လည်း ရေးပါအုံး...
အိပ်မက်ငယ် said... @ 27 January 2010 at 17:20
စိတ်ဝင်စားစရာ ပို့စ်လေးပါ...။ ဒီလိုလေးတွေများများ မျှဝေပေးပါလို့ တောင်းဆိုပါရစေရှင်...။ :)
ချော (အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) said... @ 28 January 2010 at 20:13
မှန်လိုက်တာ ..မြန်မာပြည်မှာ အင်တာနက်ကို ချက်တင်လုပ်ဖို့လောက်သာ အသုံးဝင်တယ်လို့ ထင်နေတဲ့လူတွေ ၊ ချက်တင်အတွက်သာ သုံးနေတဲ့လူတွေ အများကြီးဘဲ.... ဒီလိုလူတွေက ဒီလိုစာတွေကို ဖတ်မိမယ်မထင်..
သူတို့က အင်တာနက်ကနေ စာဖတ်ရကောင်းမှန်းမှ မသိတာ...
Kogyi said... @ 29 January 2010 at 13:14
အလွန်ကောင်းပါတယ် ညီမလေးရေ... လူတော်တော် များများက ချက်မယ် မေးလ် စစ်မယ်ဘဲ ပြောသံ အမြဲကြားနေတာ..
ရှမ်းပြည်နယ်ရဲ့ ဝေးလံသီခေါင် တစ်နေရာမှ ပေးစာ
အင်တာနက်ကို E-mail ပို့ရုံ၊ Chat လုပ်ရုံပဲလို့သာ...
Welcome to Myanmar Yangon Barcamp!!
Seminar and Workshop @ Software Testing
ကိုယ်ပိုင် website တစ်ခုကို နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ တစ်ရ...
သင့်ရဲ့ Web page ထဲမှာ ဘောင်တွေခတ်တာ လုပ်ကြည့်ကြရေ...
Welcome to Barcamp
Windows7က လှပတဲ့ Function အချို့ကို Windows Vist...